Gabar u Tartamaysa Baarlamaanka Sweden
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u soo badanay Soomaalida Qurbajoogta ah ee doorka ku yeelanaya siyaasadda wadama ay ku nool yihiin. Meelaha ay Soomaalidu sida aadka uga soo muuqatayna waxaa kamid ah gobalka Minnesota oo Soomaali badan xilal looga doortay.
Gobalkaasi ayaa waxaa todobaadkan socdaal xog aruurin ah ku joogtay Layla Cali Cilmi ah gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah golaha Deegaanka ee Degmada Engered ee magaalada Gothenburg ee wadanka Sweden, islamarkaana u sharaxan Golaha baarlamaanka ee wadaka Sweden.
Laylo Cali Cilmi, ayaa waxa ay kulamo gooni gooni ah la yeelatay mas’uuliyiinta xilalka loo doortay ee Soomaalida iyo kuwa xilalka u tartamaya. Waxaana kulan balaaran oo ay jaaliyadda la qaadatay Warbixintan nooga soo diray Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascadde.
Dhageyso Warbixinta Leyla Cali